दसैंमा तपाईंको सबैभन्दा बढी खर्च केमा हुन्छ ? | Bishow Nath Kharel
दसैंमा तपाईंको सबैभन्दा बढी खर्च केमा हुन्छ ?
Posted on October 10, 2013 by bishownath
औषधी र मासुमा हुन्छ, बोसो नभएको मासु नै पाइँदैन, बोसोसहित खाँदा एसिडिटी हुन्छ, पेट दुख्छ अनि औषधी गर्दा औषधीमा पनि खर्च हुन्छ, मासु किन्दा मासुमै पनि खर्च भैहाल्यो।
– शिवहरि पौडेल, हास्यकलाकार
खानपिनमै धेरै खर्च हुन्छ, किनभने दसैंमा बस्यो खायो अनि रमाइलो गर्‍यो, त्यही त हो।
– मिङ्मा शेर्पा गायक
दसैंको नाम खासमा खर्च पर्व हुनुपर्ने, किनभने यो पर्वमा आम्दानी त कसैको पनि हुनेवाला छैन। मचाहिँ साथीहरूलाई पैसा बाँड्दा-बाँड्दा हैरान हुन्छु, किनभने आफू त तासमा कहिल्यै जित्ने होइन।
– डिजे राजु
दसैंमा मात्र होइन, सधैं मेरो सबैभन्दा बढी खर्च हुने भनेको सपिङमै हो। अझ दसैंको बहानामा परिवारका सबै सदस्यका लागि सपिङ गर्नुपर्ने हुनाले खर्च अझ बढ्छ।
– रिमा विश्वकर्मा, नायिका
किनमेल अनि साथीभाइसँगको भेटघाटमा कढी खर्च हुन्छ।
– आशिष प्रसाईं, बिजनेस कन्सल्टेन्ट
एक ग्लास वाइन खाँदा त एक ड्रम खा’को जस्तो बनाए, त्यसकारण अब मादक पदार्थ सेवन गरिन्न, त्यसको सट्टा लुगाफाटोमा खर्च गर्छु। घर किन्दाको ऋण छ, यसपटक त्यति धेरै खर्च गरिन्न कि।
– दीपाश्री निरौला, कलाकार
१० वर्ष भयो नेपालमा दसैं नमनाएको, सधैं बाहिर भएपछि दसैंमा खर्च गर्ने जस्ता कुरा पनि अनौठो लाग्न थालेको छ, कुनै ठाउँमा डलर, कुनै ठाउँमा पाउन्डमा खर्च भैरहेको हुन्छ। मेरो दसैंमा भन्दा पनि तिहारमा बढी खर्च हुन्छ। दिदीबहिनीहरू बेलायतमा भएकाले पाउन्डमा खर्च गर्नुपर्छ।
– राजेश पायल राई, गायक
मेरो खर्च कोल्ड डि्रंक र खसीको कवाबमा हुन्छ, दसैंका लागि गरिने स्पेसल खर्च भनेको पनि त्यही नै त हो नि, होइन ?
– श्रुतिराज्यलक्ष्मी सिंह, गायिका
सबैभन्दा बढी खर्च तासमा हुन्छ, किनभने अहिलेसम्म तासमा जितेको थाहा छैन। तासमा बढी पैसा हार्छु अनि दसैंपछि हारेको पैसा सम्भिmएर कैयन् रात निदाउँदिनँ।
– विवेक खतिवडा, भिजे
दाइ भएकाले दक्षिणामा धेरै खर्च हुन्छ। हिरो भनेर साथीभाइहरूले जोस्याउँछन्, अनि तास खेलिन्छ तर कहिल्यै जितेको थाहा छैन, त्यसकारण भरसक खेल्दिनँ पनि, अलि-अलि हारिन्छ। यद्यपि दसैं भन्ने बित्तिकै धेरै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन।
– राजबल्लभ कोइराला, नायक
आ-आफ्नो हैसियतअनुसार खर्च गर्नुपर्ने हो, तर दसैंमा मासु र रक्सीको भाउ छोइनसक्नु महँगो होला जस्तो छ। तास खेल्ने टे्रेन्ड पनि उत्तिकै छ, अरूको देखासिकीमा चल्ने हामी यस्तै-यस्तै कुरामा बढी खर्च गर्छौ।
– सिरु विष्ट, कलाकार
खसी खर्च, कुखुरा खर्च, राँगो खर्च, लुगा खर्च, परिवार खर्च, किसमिस खर्च, यातायात खर्च, पाहुना स्वागत सत्कार खर्च, साह्रो तथा नरम पेय पदार्थ खर्च आम्मामा कति हो कति भनिसाध्य छैन, तर सबैभन्दा धेरै चाहिँ दक्षिणामा खर्च हुन्छ भन्ने मेरो गत वर्षसम्मको आर्थिक प्रतिवेदनले देखाएको छ।
– कुमार श्रेष्ठ, हास्यकलाकार
खर्च ? सबैभन्दा बढी घर जाँदा हुन्छ। घर जाँदा साथीभाइसँग बाटोभरि रमाइलो गर्दै गइन्छ। फेरि घरमा कोसेली पनि लिएर जानुपर्‍यो। यसपालि पनि सपिङ भन्दा घर जाने खर्च बढी छुट्याएकी छु।
– सिर्जना खत्री, मोडल/गायिका
म माछामासु तथा सोमरसको सौखिन होइन। दसैंमा लुगाफाटो पनि किन्दिनँ। स्टाफलाई दसैं खर्च दिँदादिँदै कमाएको पैसा सकिन्छ। हारियो भने जुवातासमा खर्च हुन्छ।
– सुमन गैरे, सञ्चारकर्मी/कलाकार
मेरो परिवारमा बुबाआमा र म तीन जना मात्र छौं, तास अलि-अलि खेलिन्छ, हारियो भने तासमै धेरै खर्च हुन्छ, नत्र सधैं जस्तै हो। धेरै खर्च नहुने भएकाले यसपटकको दसैंमा गर्लफ्रेन्ड बनाउने योजनामा छु, यदि पाए भने उनका लागि सपिङमा खर्च हुन्छ।
– दिवस उप्रेती, नायक
दसैंमा ? मेरो प्राय सपिङमै धेरै खर्च हुन्छ, सानो छँदादेखि नै दसैंमा मामाघरमा टीका लगाएर आएको पैसा पनि सपिङमै खर्च गर्थें, अहिले पनि त्यही हो।
– नन्दिता केसी, नायिका
पत्रकारको त खर्च नै सबैभन्दा कम हुन्छ, पहिलो कुरा दसैंमा बिदा पनि पाइँदैन, अफिस आउनै पर्‍यो, अब आधा समय अफिसमै बिताएपछि कहाँ खर्च गर्नु ? सपिङलाई पनि समय छैन भनेर टार्न पाए अझ जोगाइन्छ।
– रूपेश श्रेष्ठ, समाचारवाचक
दसैंमा सबैभन्दा बढी खर्च तासमा हारियो भने हुन्छ, नत्र त अन्य सामान्य नै हो।
– दिनेश डिसी, निर्देशक/कलाकार
घुम्दा, नयाँ-नयाँ डे्रस किन्दा अनि मीठा-मीठा खानेकुरामा। हुन त महँगीले गर्दा खसीको मासुमा सबैभन्दा खर्च होला जस्तो छ।
– रोमा न्यौपाने, नृत्यांगना
म रक्सी पिउँदिनँ, तर रक्सी किन्दा बढी खर्च हुन्छ। हाम्रोमा पाहुना जाँदा सगुनका रूपमा रक्सी लानैपर्छ
– बबिन्द्र नेम्वाङ, गीतकार
दसैंमा आफन्तदेखि साथी भाइबीच म्यारिज बढी चल्छ, तर जितभन्दा हार नै बढी हुन्छ, तर पनि खै किन हो खेल्न मन लाग्छ।
– लोकराज अधिकारी, गीतकार
परिवारको जेठो सन्तान भएकाले उत्तरदायित्व पूरा गर्दा खर्च त हुने नै भयो, सँगसँगै साथीभाइ भेटघाट तथा पर्सनल सपिङमा अलि-अलि खर्च हुन्छ। गर्लफ्रेन्ड नहुनु अनि मदिरा र धूम्रपान पनि त्यागेकाले यो पालि कम खर्चमै दसैं टर्नेछ भन्ने विश्वास छ।
– श्याम भट्टराई, निर्देशक
हुन त दसैं भन्नेबित्तिकै खसीको मासु खाने, रक्सी पिउने जुवातास खेल्ने पर्व बुझिन्छ, तर मेरो केसमा उल्टो छ, म नजिकका साथीहरूलाई बोलाएर पार्टी दिन्छु, त्यही पार्टीमा धेरै खर्च हुने हो।
– हसन खान, नायक
सबैभन्दा बढी लुगा किन्न खर्च हुन्छ, आफ्ना लागि लुगा किनिसकेपछि भान्जीहरूका लागि भनेर किन्न जाँदा फेरि आफ्ना लागि पनि किनिन्छ, त्यस्तै भाइ र साथीहरूका लागि किन्न जाँदा राम्रा लुगा देखे फेरि किनिन्छ, पैसा त लुगा किन्दैमा सकिन्छ।
– निरु खड्का, कलाकार
साथीहरूसँग घुम्दा-फिर्दा रमाइलो गर्दामा बढी खर्च हुन्छ, तर रक्सी खानमा खर्च हुने होइन नि, तास खेल्दा पनि एकदमै खर्च हुन्छ जहिले पनि ड्याड र भाइले जित्छन्, आफू त सधैं हारिन्छ।
– अमिर सेख, गायक एवं मोडल
भोजन र दक्षिणामा धेरै खर्च हुन्छ।
– भूमिराज राई, गायक
साथीहरूसँगको घुमघाममा धेरै खर्च हुन्छ, किनभने दसैंको समयमा काठमाडौंको सवारी असाध्यै महंगो हुन्छ।
– राम सिटौला, संगीतकार
अहिलेको फेसनेबल युगमा डे्रसमै धेरै खर्च हुन्छ, त्यसमा पनि केटी मान्छेले सपिङ रुचाउँछन्। फेरि यही बेला त हो नि यसो कार्ड पनि फिट्नुपर्‍यो नि साथीभाइहरूसँग।
– सन्जना श्रेष्ठ, गायिका
म्यारिजमा म प्रायः हार्दिनँ, त्यसकारण तासमा त्यति खर्च हुँदैन। दसैंको समयमा झापामा हुन्छु, त्यहाँ रहँदा साथीभाइहरूसँग जमघट हुन्छ, हरेक दिनको पार्टीमा बिल तिर्ने जिम्मा मेरो हुन्छ, त्यसमै बढी खर्च हुन्छ।
– राजेश घतानी, निर्माता/उद्घोषक
दसैं, तिहारमा महँगी र लुटपाट बढ्ने सम्भावना
दसैं, तिहार लाग्यो। यतिबेला महँगी र लुटपाट बढ्ने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ। त्यसको नियन्त्रणका लागी सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गर्नुपर्‍यो।
– गणेश पोखरेल, झापा
दसैंका बेला यातायात व्यवसायीहरूले यात्रुहरूसँग बढी पैसा असुल्ने गरेका छन्। विद्यार्थीहरूले पाउने छुट त परै जाओस्, सहज ढंगमा टिकटसम्म पनि उपलब्ध गराउँदैनन्। बढी पैसा कमाउने उद्देश्यले क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोचेर राख्छन्, जसले गर्दा दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ। यस्तो कुरामा बेलैमा सचेत हुनु राम्रो।
– परिना लिम्बु, सुजाता राई
निर्वाचनमा भुवन केसी, रेखा थापाहरूलाई जिताएर पठाउँदा कति नौटंकी हुन्छ होला ?
– गणेश पोखरेल, सुरुंगा
बजारमा म्याद गुजि्रएका पेय पदार्थहरू भेटिने क्रम रोकिएको छैन। त्यसैले यस्ता पेयपदार्थ पिउनु अघि एक पटक मिति हेर्न अनिबार्य छ।
– शोभिता सिम्खडा
परराष्ट्र मन्त्रालयले एमआरपी पासपोर्ट मार्फत दैनिक ठूलो रकम असुल्छ, तर सेवाग्राहीहरूलाई पटक्कै सुविधा छैन। पासपोर्टका लागि र्फम बुझाउन जाँदा उस्तै लाइन हुन्छ, लिन जाँदा पनि त्यत्तिकै ठूलो भीड हुन्छ। बरु प्रमुख सहरमा यो सुविधा उपलब्ध गराए जनताको दुःख कम हुुन्थ्यो कि ?
– सुनिल बस्ताकोटी, लाजिम्पाट
नेपालका युवाहरू ठूलो संख्यामा लागुऔषध दुव्र्यसन फसेका छन्। बेरोजगारी एवं गरिबीले उब्जाएको यो समस्या बेलैमा न्यूनीकरण गर्न सकिएन भने भोलीका दिनमा ठूलो संकट निम्तिने कुरामा कुनै शंका छैन।
– बलबहादुर कुँवर
नवरात्रमा पुजिने मन्दिरहरु
आराध्य देवी दुर्गाको पूजा हुने नवरात्रि दसैंको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। नौ दिनसम्म देवीको पूजा गरेर आर्जित शक्ति आशीर्वादका रूपमा आफूभन्दा सानालाई बाँडिन्छ।
देवीका नौ रूपमध्ये पहिलो दिन शैलीपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्दमाता, छैटौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी तथा नवौं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा गरिन्छ। यी नौ देवीको पूजा भिन्न भिन्न शक्तिका लागि गरिन्छ। जुन घरमा विधिपूर्वक चण्डीपाठका साथ यी देवीको पूजा गरिन्छ, उक्त घरमा टिका ग्रहण गर्ने हो भने त्यस्ता व्यक्तिको इच्छा आकांक्षा पूर्ति हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। जसले घरमा नौ दिन दुर्गाको पूजा गर्न सक्दैन, उसले देवीका विभिन्न मन्दिरबाट फूलपाती घर लाने चलन छ। उक्त फूलपाती जमरामा मिसाएर टीका ग्रहण गर्ने मानिसलाई दिइन्छ।
नेपालमा दसैंमा भीड हुने सयौं मन्दिर छन्। देवी दुर्गाको प्रतिभा स्थापित भएका साधारण मन्दिरमा पनि उत्तिकै भीड हुन्छ भने देवीका आकर्षक मूर्ति बनाई नौ दिनसम्म पूजेर दसौं दिन नदीमा विसर्जन गर्ने चलन पनि तराई क्षेत्रमा निकै प्रचलित छ। यति हुँदाहुँदै पनि काठमाडौंका शक्तिपीठहरू विशेष प्रसिद्ध छन्।
प्राचीनकालदेखि नै उपत्यकाका लिच्छवि र मल्ल राजाहरूले यी शक्तिपीठको दर्शन गर्ने चलन थियो। शाहकालीन राजाहरूले त्यसलाई थप महत्त्व दिए भने गणतन्त्रपछि पनि राष्ट्रपतिले यी शक्तिपीठको दर्शन गर्ने चलन छ।
यस्ता शक्तिपीठहरूमा नक्साल भगवती, गुह्येश्वरी, मैतीदेवी, संकटा, भद्रकाली, शोभा भगवती बढी प्रसिद्ध छन्। त्यसबाहेक घटस्थापनाका दिन भक्तपुरको ब्रह्मायणी मन्दिरमा भव्य मेला लाग्छ। दसैंमा ब्रह्मायणी र तलेजु भवानीको पूजा एवं दर्शन गर्नाले सुख, शान्ति तथा समृद्धि मिल्छ भन्ने धार्मिक मान्यता छ भने सम्पूर्ण नेवारी परम्पराको पूजा शैली यो क्षेत्रमा देखिने हुँदा पनि सर्वसाधारणको भीड हुन्छ। घरबाट घिसिँ्रदै यी मन्दिर पुगेर आफ्ना इच्छा-आकांक्षा देवीलाई सुनाउनेहरू पनि प्रसस्तै भेटिन्छिन्। यसो गर्दा सम्पूर्ण इच्छा पूरा हुने विश्वास उनीहरूको छ। यही कारण पनि भक्तपुरका यी दुई मन्दिर दसैंमा भीड हुने मन्दिरमा पर्छन्।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका शक्तिपीठहरू दक्षिणकाली, गुह्येश्वरी, मैतीदेवी, नरदेवी, कालिकास्थान, नक्साल भगवती, भद्रकाली, शोभाभगवती, विजेश्वरी, इन्द्रायणी, रक्तकाली, बज्रयोगिनी, संकटा, बज्रबाराही आदि मन्दिरमा अष्टमीका दिन विशेष भीड हुन्छ। यी मन्दिरमा बिहानैदेखि बलि चढाउने, पूजा आराधना गर्ने र रमाइलो हेर्नेहरूको भीड हुन्छ। महाअष्टमीकै अवसरमा हनुमानढोकाको दसैंघर तथा जमराकोठामा विशेष पूजा हुने भएकाले यी सबै मन्दिर अवलोकनलायक हुन्छन्। हनुमान ढोकाको दसैंघरमा अष्ठमीको मध्यरातमा शक्तिरूपिणी दुर्गाभवानीको पूजाअर्चनाका साथै एकसाथ ५४ राँगा र ५४ बोकाको बलि दिने परम्परा छ।
विज्ञहरूका अनुसार महादेवकी पत्नी सतिदेवीको अङ्ग पतन भएको स्थान नै वास्तविक शक्तिपीठ हो। सतिदेवीका कुल ५२ अङ्ग पतन भएको शास्त्रमा उल्लेख छ। ती मध्ये नौवटा अङ्ग नेपालमा पतन भएका थिए।
खुल्यो डिभी चिट्ठा
सन् २०१५ डिभी कार्यक्रमका लागि आवेदन सन् २०१३ अक्टोबर १ मध्यान्ह -इस्टर्न स्टयान्डर्ड टाइम) देखि सन् २०१३ नोभेम्बर २ मध्यान्ह -इस्टर्न स्टयान्डर्ड टाइम) सम्म खुला रहने नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आवेदकहरूलाई सकेसम्म छिटो आवेदन भर्न आग्रह पनि गरेको छ।
डिभी चिट्ठामा सहभागी हुन कुनै शुल्क लाग्दैन। आवेदन भर्दा कन्सल्टेन्ट अर्थात् परामर्शदाताको सहयोग नलिन अमेरिकी दूतावासले सुझाव पनि दिएको छ। चाहिएकै खण्डमा बरु पारिवारिक सदस्य, साथी वा अन्य विश्वासिला व्यक्तिको मद्दत लिनु उपयुक्त हुने दूतावासको तर्क छ। जसको मद्दत लिए पनि अन्त्यमा आफ्नो आवेदनका लागि आफू स्वयं नै जिम्मेवार हुने दूतावासको भनाइ छ।
डिभी-२०१५ डाइभर्सिटी भिसा चिट्ठाका लागि इलेक्ट्रोनिक माध्यमद्वारा निश्चित अवधिभित्र आवेदन पेस गरिसक्नुपर्नेछ। आवेदकहरूले दर्ता अवधिभर डाइभर्सिटी भिसाका लागि इलेक्ट्रोनिक आवेदन फारम -ई-डिभी) http://www.dvlottery.state.gov बाट प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसरी डिभी आवेदन दर्ता गर्दा आफ्नो श्रीमान् वा श्रीमती तथा २१ वर्षमुनिका सबै अविवाहित सन्तानको नाम अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ। आफ्नो परिवारका सदस्यको नाम उल्लेख नगरिए उक्त आवेदन स्वतः रद्द हुनेछ। डिभीका लागि केवल एउटा आवेदन मात्र बुझाउन सकिन्छ। एउटाभन्दा बढी आवेदन बुझाए डिभीका लागि अयोग्य ठहरिने कुरा अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ।
दर्ता पूरा गरिसकेपछि आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर (confirmation number) प्रिन्ट गरी सुरक्षित राख्नुपर्छ। केवल यो नम्बरमार्फत मात्र आफूलाई डिभी परे-नपरेको थाहा पाउन सकिन्छ। आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर (confirmation number) कसैलाई दिनु हुँदैन। आवेदन भर्ने क्रममा आफ्नो इमेल ठेगाना पनि भर्नुपर्ने हुन्छ, तर डिभी विजेताहरूलाई आफूलाईडिभी परे-नपरे जानकारी इमेलमार्फत गराइँदैन। डिभी परे-नपरेको थाहा पाउने एउटै उपाय सन् २०१४ मे १ का दिन वा पछाडि http://www.dvlottery.state.gov मा गई आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर हाली हेर्ने हो। यदि आफू छनौट भइएको छ भने अब के-के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा उक्त वेबसाइटमै निर्देशनहरू दिइएको हुन्छ। त्यहाँ आफूले डिभी फारम भर्दा दिइएको इमेल ठेगानामा अपोइन्टमेन्टसम्बन्धी जानकारी पठाइने कुरा उल्लेख गरिएको हुनेछ। हरेक डिभी आवेदकलाई आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर सन् २०१५ जून ३० सम्म सुरक्षित राख्न अमेरिकी दूतावासले आग्रह गरेको छ।
प्रबल गुरुङ अब अमेरिकी नागरिक
नेपाली फेसन डिजाइनर प्रबल गुरुङ औपचारिक रूपमा अमेरिकी नागरिक भएका छन् । सेप्टेम्बर ६ तारिखमा उनले नागरिकता ग्रहण गरेको समाचार अमेरिकी फेसन वेबसाइट डब्लुडब्लुडीले जनाएको छ । प्रबलको जन्म सिंगापुरमा भएको हो र उनी काठमाडौंमा हुर्किएका हुन् ।
नागरिकता ग्रहण गरेपछि प्रबलले स्थानीय ज्याकोभ के जेभिट्स भवनमा सानो सपथ ग्रहण कार्यक्रम गरेका थिए । ‘म बिहानै ब्युझिँए र एकपटक आफूले भोगेका सबै क्षण सम्झिएँ,’ प्रबलले भनेका छन्- ‘मलाई अमेरिकी सपनाले लखेटिरहेको थियो । यो महत्वपूर्ण दिन मबाट टाढा थियो, तर आज यथार्थ भएको छ । यसले मलाई वास्तवमै भावुक तुल्याएको छ ।’ उनले आफूले नागरिकता प्राप्त गरेको र अमेरिकी झन्डा समातेको तस्बिर पनिसार्वजनिक गरेका छन् । केही महिनाअघि टाइम म्यागजिनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै प्रबलले आफ्नो सफलतामा नेपाली योगदान अविष्मरणीय रहेको कुरा उल्लेख गरेका थिए ।